Umegba ọkụ okpu usoro
Igwe ọkụ bụ ihe eji eme ụlọ nyocha a na-ejikarị eme ihe na ụlọ nyocha nke chọrọ ikpochapu gas, na ọ dị mkpa ka a kpochaa ma hapụ ya n'oge nnwale ahụ.
Isiokwu ụdị àjà ihe ọ ultraụ ultraụ-ọcha workbench usoro
Clean bench bụ ụdị ele mmadụ anya n'ihu dị ọcha akụrụngwa eji dị ọcha gburugburu ebe obibi. Adaba adaba, usoro dị mfe yana arụmọrụ dị elu. A na-ejikarị ya na ngwá electronic, ngwá ọrụ, ahịa ọgwụ, ngwa ngwa, ọdịbendị anụ ahụ, ụlọ ọrụ nyocha sayensị na ụlọ nyocha, wdg.
Vetikal eruba àjà ihe ọ -ụ -ụ-ọcha workbench usoro
Kwụ na vetikal sọrọ-nzube ultra-ọcha workbench usoro
Designdị imewe ahụ na-eburu n'uche mkpa nke ndị ọrụ. Dika ogugu di egwu nke oma, enwere ike idozi uzo eji eme ihe na windo, na eme ka nnwale ahu di mfe ma di mfe.
Kwụ eruba àjà ihe ọ -ụ -ụ-ọcha workbench usoro
DRK-820 Onye Nchọpụta Pụrụ Iche Maka Nchebe Akwukwo nri
A na-ejikarị ya eme nchọpụta ngwa ngwa nke ahịhịa organophosphorus na carbamate pesticide na nri ndị dị ka akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi, tii, ọka, akụrụngwa na ngwaahịa sideline.
DRK-830 Nchọpụta Multifunctional Detector
Nchọpụta ọtụtụ ọrụ nwere ike ịchọpụta isi ihe atọ dị na pidide pesticide, ọla dị arọ na nitrate na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na-eburu "nkata akwukwo nri".